भारतमा पुनरागमन गर्दै टिकटक - नागरिक रैबार
भारतमा पुनरागमन गर्दै टिकटक
भारत सरकारले सन् २०२० मा टिकटकलगायतका विभिन्न चिनियाँ एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
भारतमा प्रतिबन्धित हुने एपमा मोबाइल गेम पब्जी पनि थियो । यद्यपि पब्जीमाथिको प्रतिबन्ध भारतले फुकुवा गरिसकेको छ । तर टिकटकलगायतका अन्य चिनियाँ एपहरूले भारतमा फिर्ता हुने समय कुरिरहेका छन्। यसैबीच टिकटकले भारतमा पुनरागमन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सले भारतमा आफ्नो साझेदारको खोजी गरिरहेको छ । सोही भारतीय पार्टनरको साथमा भारतमा पुनरागमन गर्ने तयारी टिकटकको रहेको छ ।
भारतीय साझेदारले टिकटकलाई भारतमा फिर्ता हुन सहयोग गर्ने बताइएको छ । जसले भारतमा टिकटक कम्पनीमा काम गर्ने नयाँ कर्मचारीको लागि आवेदनसमेत माग गर्नेछ ।
इकोनोमिक्स टाइम्सका लागि बाइट डान्स भारतमा फिर्ता हुनका लागि हिरानन्दनी ग्रुपसँग छलफल गरिरहेको छ । उक्त ग्रुपको डाटा सेन्टर व्यवसाय छ जुन योट्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर सोलुसनको नाममा सञ्चालित छ ।
इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसार भारतमा पुनरागमनका विषयमा बाइटडान्सले सरकारसँग भने कुनै परामर्श तथा सम्पर्क नगरेको वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
यदि टिकटक भारतमा फिर्ता भएमा उसले भारत सरकारको नियमानुसार काम गर्नुपर्नेछ र डाटा सेन्टर पनि भारतमै राख्नुपर्नेछ ।
समाचार अनुसार बाइटडान्सले टिकटकलाई भारतमा फिर्ता गराउनका लागि पब्जीको मातृ कम्पनी क्राफ्टनकै रणनीति अनुसार का मगर्नेछ ।
भारतीय बजारमा कुनै समय निकै लोकप्रिय रहेको टिकटक पुनः भारतीय बजारमा फिर्ता भएमा उसले चिंगारी, एमएक्स टका टक तथा इन्स्टाग्राम रिल्स जस्ता एपहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।
अहिले इन्स्टाग्राम रिल्स भारतीय प्रयोगकर्ताबीच निकै लोकप्रिय छ ।
असार १ बाट मतदाता नामावली दर्ता खुला
साथीले बर्थ डे मनाउन बोलाएर गरे सामुहिक बलात्कार
काठमाडौं। जापान सरकारले विभिन्न ४८ वटा ठूलो प्रविधि कम्पनीहरुमाथि जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ ।मुलुकमा आफ्नो कार्यालय नराखेको भन्दै जापानले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटासँगै गुगल र ट्वीटर लगायतका कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने भएको हो । जापानले उल्लेखित विश्वस्तरीय कम्पनीहरुलाई आफ्नो मुलुकमा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि गत मार्च सम्मको समय दिएको थियो । जापान सरकारको त्यस्तो निर्देशनलाई […]
काठमाडौं । बजारमा एक पछि अर्को अत्याधुनिक स्मार्टफोन आएसँगै ब्याट्रीको चार्ज नटिक्ने समस्या पनि बढ्दै गएको छ । स्मार्टफोन जति धेरै ठूलो तथा बढि फिचर्सयुक्त भयो ब्याट्रीको खपत पनि उति नै बढि हुन्छ । यस्तोमा कम्पनीहरुले उच्च ब्याट्री क्षमतायुक्त फोनहरु बजारमा ल्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म बजारमा ७ हजार मिलिएम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री भएका केही स्मार्टफोन […]
तपाईंको स्मार्टफोन हरायो ? फोन खोज्न गुगलको यो फिचर सहयोगी हुनेछ
हामीले धेरै सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कहिलेकाही विभिन्न कारणले हामीले प्रयोग गरिरहेको स्मार्टफोन हराउन पुग्दछ ।आफ्नो फोन हराउँदा फोनको मूल्यका कारण मात्र होइन त्यसमा रहेका आफ्ना निजी तथा महत्वपूर्ण डाटा अन्य व्यक्तिको हातमा पर्ने चिन्ताले पनि हामीलाई निकै तनाव दिन्छ । हराएको फोन खोजीका लागि प्रहरीको निवेदन दिनेलगायतका अन्तिम विकल्प त छँदैछन् । तर सुरुमा […]
देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था छ : इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले जुनसुकै समयमा सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । निजी तवरका इन्टरनेट वितरण केन्द्रहरुमा बिजुली काटिने क्रम बढेको भन्दै आईस्पानले यस्तो चेतावनी दिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई कक्षा १२ को परीक्षाभर देशभर इन्टरनेट सेवामा अवरोध नहुने गरी व्यवस्थापन […]
F1 देखि F12 सम्म, यस्ता छन् सर्टकट की को काम
आफ्नो कम्प्युटर किबोर्डको सबैभन्दा माथिका बटनहरुमा हेर्नुहोस् । त्यहाँ F अक्षरको शृङ्खलाका बटनहरू हृुन्छन्, F1, F2, F3 गरी F12 सम्म ।यी बटनलाई क्विक फंक्सन की भनिन्छ र यिनीहरुले कम्प्युटरमा तपाईंको काम निकै सजिलो बनाउँछन् । विभिन्न ब्राउजरमा यसको प्रयोगले कम्प्युटर प्रयोगकर्ताको समय बचाउँदछ ।माइक्रोसफ्टका अनुसार सर्टकट सँगै एक्सटर्नल की बोर्डले माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम गर्न निकै […]
तपाईंले स्मार्टफोन, स्मार्टवाच तथा अन्य स्मार्ट ग्याजेटहरू त प्रयोग गर्नुभएकै छ होला । तर के तपाईंले स्मार्ट जुत्ता प्रयोग गर्नुभएको छ ? जुत्ता उद्योगमा स्मार्ट प्रविधिको रिक्तता पूर्ति गर्दै चर्चित जुत्ता ब्राण्ड Nike ले नयाँ स्मार्ट जुत्ता सार्वजनिक गरेको छ । नाइकको यो जुत्ता स्मार्ट तथा पूर्णरुपमा अटोमेटिक छ । यो जुत्ताले रोबोटले जस्तै आफ्नो […]